हाम्रो व्यवसाय र संघलाई बलियो बनाएर अगाडि लैजान हामी एक जुट भएका छौं : ध्रुबबहादुर थापा [अन्तर्वार्ता] « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
अध्यक्ष अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)
पुष १८, २०७८ आईतबार
अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)को गत मंसिर २३ गते ४५ औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । सभाले नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गरेको छ । निर्वाचनबाट अध्यक्ष पदमा निर्वाचित ध्रुबबहादुर थापासँग नाडाको आगामी योजना, नेपालमा अटोमोबाइल व्यवसायको अवस्था र चुनौती, सरकारको सवारी नीति, सडकको अवस्थालगायत विषयमा अनलाइनपानाकर्मी रामनाथ कुँवरले गरेको कुराकानीको संम्पादित अंश :
अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)मा तपाईँ अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि के—के कामहरू सुरू गर्नु भयो ?
हामीले निर्वाचित भएर सफथ लिएको एक हप्ता मात्रै भएको छ । सर्वप्रथम हामी नाडामा कमिटिहरू गठन गर्ने क्रममा छौं । त्यसपछि हाम्रो अन्य कामहरू क्रमबद्ध तरिकाले अगाडि बढाउने छौं । अहिले हामीले सरकारी निकायहरूसँग भेटघाट गरिरहेका छौं । हाम्रो व्यवसायमा भएका समस्याहरू समाधान गर्न हामी पहल गरिरहेका छौं । त्यसैगरी हामी अब विधान संसोधनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं । नियमित हुने कामहरू त भई रहन्छन् । त्यसैगरी हामी नेपालमा इंटरनेशनल अटोमोबाइल समिति गठन गर्ने भन्ने तयारीमा छौं । अन्य व्यवसायिक कामहरूको लागि सरकारसँग सम्बन्ध बढाउन गर्ने भएकोले हाम्रो प्रयास जारी छ ।
नाडामा व्यवसायीहरूमा एकता छ ?
हामी साधारण सभाको निर्वाचनमा प्यानलसहित निर्वाचन लडे पनि अहिले त्यो भङ्ग भएको छ । हामी निर्वाचित भएपछि सबै व्यवसायीहरूलाई साथमा लिएर अगाडि बढने बाटोमा छौं । सबै व्यवसायीको समस्या र एजेण्डाहरू एकै हुन् । निर्वाचनमा बनेको प्यानल निर्वाचनको दिनसम्म मात्र थियो । अहिले हाम्रो व्यवसाय र संघलाई बलियो बनाएर अगाडि लैजान हामी एक जुट भएका छौं । हाम्रो मुल मुद्धा नै व्यवसायीको हक हितका लागि काम गर्ने हो ।
नाडालाई संस्थागत रूपमा बलियो बनाउन र नेपाल सरकारसँग विवादित विषयलाई सुल्झाउन तपाईँ अब कस्तो कदम चाल्नुहुन्छ ?
हाम्रो व्यवसायसँग सरोकार राख्ने सरकारको निकायहरू जस्तो यातायात विभाग, भन्सार विभाग, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र अन्य निकायहरूसँग हामीले भेटघाट, छलफल सुरू गरेका छौँ । त्यसैगरी प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायसँग पनि छलफल सुरू गरेका छौँ । हाम्रो नाडाको निर्वाचनले पनि सबैलाई नाडाको विषयमा जानकारी भएको रहेछ । नाडाको प्रचारप्रसार पनि राम्रो भएको देखिएको छ । पहिले नाडालाई एउटा अटो सो मात्रै भनेर चिनिन्थ्यो भने, अहिले नाडालाई संस्था हो भनेर देशव्यापी रुपमा नै सबैले चिनेका छन् । त्यसले गर्दा पनि हामीलाई आफ्नो कुरा राख्न र उपस्थिति जनाउन सहज भएको छ । सरकारसँग हामी नाडाको समस्या र मागलाई राख्ने छौं ।
तपाईँले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिँदै गर्दा नाडालाई प्रविधिमैन्त्री बनाउने एजेण्डा अगाडि सार्नु भएको थियो । अब निर्वाचित भएपछि नाडालाई प्रविधिमैत्री बनाउन कसरी काम अगाडि बढाउनु हुन्छ ?
नाडालाई प्रविधिमैत्री बनाउन कामहरू सुरू भैसकेको छ । हामीले नाडा ओएवसायिडलाई पुरानो भएकोले नयाँ बनाउन अपडेट गर्न दिइसकेका छौं । संघलाई सुचना प्रविधिमैत्री बनाउन एउटा कमेटि गठन गर्दै छौँ । त्यसले व्यवसायीलाई छिटो म्यासेजहरू जाने छिटो सुचना जाने बनाउन काम गर्ने छ । हामी हार्डकपीलाई पनि डिजिटलाइट गर्दै छौं । त्यसले पनि एप्लिकेशनको माध्यामबाटै तुरुन्तै सूचना प्रदान हुन्छ । अझै हामी समयको माग अनुसार अन्य सुधारहरू पनि गर्दै जाने छौं । अब नाडा प्रविधिमैत्री बन्छ ।
नाडा पूर्ण रूपमा संघीय संरचनामा गैसकेको हो ?
संघीय रूपमा गइसकेको छ । हाम्रो सात वटै प्रदेशहरूमा हाम्रो संस्था स्थापित भइसकेको छ । कतिपय नसमेटिएका पक्षहरू छन् । ती सबैलाई कसरी समेटेर जाने भन्नेमा हामीले छलफल गर्न थालेका छौं । कतिपय पहिलेदेखि नै सकृय छन् । कतिपय भने तदर्थ समिति गठन गरेर चुनाव गर्न तिर अगाडि बढ्दै छन् । प्रदेशका संस्थाहरूलाई एकजुट बनाएर अधिकार सम्पन्न बनाएर लैजान हामीले पहल थालेका छौं ।
साना व्यवसायीको हितमा जोडो दिने प्रतिवद्धता गर्नु भएको थियो । यसमा कसरी काम सुरू गर्नुभयो ?
सर्वप्रथम हामीले भ्यू बुझने काम गछौँ । हामीले कुनै व्यवसायीको व्यक्तिगत काम नभएर सामुहीक संस्थागत रूपमा काम गर्ने हो । अहिले कतिपयले भन्सारमा दुख पाएका छन् । कतिपयले डिलरमा समस्या पाएका छन् । डिलरको स्टकमा विक्रिको लागि राखिएको वस्तुमा पनि कर लागेको छ । त्यो कर लिन भएन भन्ने हाम्रो माग हो । हामीले सरकारसँग यो कुरा राखिसकेका छौं । यसलाई सरकारले पनि सकरात्मक रूपमा लिएको छ । यि साना व्यवसायीका कुरा हुन् । यस्ता कुराहरूमा हामीले ध्यान दिएका छौं ।
सवारी साधनको प्रदुषण नियन्त्रणमा अब नाडाले कस्तो भूमिका खेल्छ ?
यसमा सरकारले पनि विशेष पहल गरिराखेको छ । नेपाल प्रदुषण मापदण्डलाई पनि अपग्रेट गर्न सरकार गैराखेको छ । हामीले चाहिँ यसमा विद्युतीय सवारी साधनको आयतमा हामीले वृद्धि गरिराखेका छौँ । यसमा सरकारले पनि साथ दिएको छ । प्रदुषण रहित सवारीको आयतमा बढवा दिए पछि । सवारी प्रदुषण कम हुन्छ । मानवीय स्वास्थ्य, नेपालको विद्युतीय खपत जलमैन्त्री भएकोले पनि हामी त्यसमा लागेका छौँ ।
अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)मा हाल मुख्य-मुख्य समस्याहरू के—के छन् ?
अहिले तत्कालै आएको एमसीको कुरा छ । यसमा जुन ५० प्रतिशत मार्जिनको कुराले व्यवसायीलाई व्यवसाय गर्न नै अप्ठेरो पर्ने भएको छ । आयत गर्न पनि समस्या भएको छ । यसमा ५० देखि १०० प्रतिशत सम्म मार्जिन राख्न पर्ने भन्ने आएको छ । यसका लागि हामीले सरकारसँग कुरा राखेका छौँ । अर्को कुरा भन्सारमा आयत मूल्य सूचि राखेको छ । संसारमा नभएको सिस्टम नेपालमा लागु गरेको छ । जबकि हामीले एमसी खोलेर ट्रान्सफरेन्सी रूपमा वस्तुहरू आयत गरिराखेका छौँ भने सरकारले आफ्नै तरिकाले भन्सार मूल्य सूचि त्योकेको विषयले अप्ठेरो बनाएको छ ।
प्रकाशित मिति : पुष १८, २०७८ आईतबार १२ : ५८ बजे
अनलाइनको माध्यमबाट सुविधा दिइरहेका छौं : अर्जुन केसी [अन्तर्वार्ता]
प्रतिस्पर्धी बैंकिङ बजारमा कामना सेवा विकास बैंक सबैभन्दा अब्बल छ : सीइओ प्रविण बस्नेत [अन्तर्वार्ता]